Fifankahafantarana Amin’ny Mpandika Teny: Ho an’i Yann Leymarie, Misy Akony Amin’ny Maha Izy Azy sy ny Zavatra Ataony ny Soatoavina sy ny Fitsipiky ny GLobal Voices. · Global Voices teny Malagasy
Fifankahafantarana Amin'ny Mpandika Teny: Ho an'i Yann Leymarie, Misy Akony Amin'ny Maha Izy Azy sy ny Zavatra Ataony ny Soatoavina sy ny Fitsipiky ny GLobal Voices.
Voadika ny 28 Febroary 2018 2:13 GMT
Yann Leymarie – Sary natolotra
Yann LEYMARIE a rejoint l'équipe de traducteurs de Global Voices en français en novembre 2017. Responsable de la branche girondine d'un réseau européen s'occupant d'écologie marine, il a bien voulu répondre aux questions de notre contributeur de longe date Abdoulaye Bah…. Nanatevin-daharana ireo mpandika-teny Global Voices amin'ny teny Frantsay i Yann LEYMARIE tamin'ny volana Novambra 2017. Tompon'ndraikitrin'ny sampana Eoropeanina ao Bordeaux izay miandraikitra ny tontolo an-dranomasina, nanaiky ny hamaly ireo fanontanian’ i Abdoulaye Bah, mpiara-miasa aminay hatry ny ela, izy.
Global Voices (GV): Yann, iza moa ianao? Inona ny dikan'ny hoe Surfrider ary maninona no io solonanarana io?
Yann Leymarie (YL) :Yann no anarako, olom-pirenena Frantsay izay mipetraka ao Bordeaux kanefa niaina tany Azia sy tany amin'ny firenena tatsinanana aho tnandritra ireo taona maromaro lasa. Surfrider Foundation Europe no anaran'ilay fikambanana iasako. Nanomboka tamin'ny 1990 aho dia Tompon'andraikitra amin'ny birao mpandrindra ho an'ity ONG ity izay misahana ny fiarovana ny tontolo anaty rano, an-dranomasina ary ireo mpampiasa azy nanomboka.
GV est preneur, vous savez ?… Satria efa miasa ao amin'ny sehatry ny tontolo iainana ny ONG Surfrider, mieritreritra ny hanoratra lahatsoratra ho anay iresahana momba io lohahevitra io ve ianao? Raisin'ny GV anie e.
YL : Fantatro fa misy sampan-dahatsoratra momba ny tontolo iainana satria ny fandolàna voalohany nataoko dia niresaka momba ny fiantraikan'ny foibe famokarana herinaratra ao amin'ny Valanjavaboary nasionaly ao Valbona any Albania. Amin'izao fotoana izao dia mahazo aina kokoa aho amin'ny fandikana teny kanefa mila manao dingana aho indray andro any, henoko sahady ao an-tendako ao ny fofonain-dry ramatoa tonia.
GV :Tantarao anay ny fomba nahitanao an'ny Global Voices, ary ny zavatra nanintona anao tao?
YL : Nitady mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny tetikasa fandikana teny tao amin'ny tranonkalan'ny Firenena Mikambana aho ka nifanandrify tsy nahy taminà kandidà iray izay mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny Global Voices. Noho izaho liana dia mazava ho azy fa nandeha nitsikilo kely aho. Tonga dia nahasarika ahy ny soatoavina sy ny fitsipiky ny GV, mampiako ny maha izaho ahy sy ny zavatra ataoko izany.
GV :Tao aorian'io traikefa fohy io, afapo ve ianao?
YL: Hatreto aloha dia faly be tamin'ny fanapahankevitro aho. Tsotra ny fandraisana anjara kanefa voafehy, misy fifanajana be ny fifandraisana ary zava-dehibe ho an'ny fahazotoana ny fanohanana maharitra avy amin'ny vondrona mamehy. Misy fahaizamanao goavana ao ambadika ao!
GV : Noho ianao tanora, mino aho fa manana zavatra maro mahaliana aoano ianao amin'ny fiainana. Inona ny toeran'ny GV amin'ireo zavatra ataonao? Ary ahoana ny ampiarahanao azy ireo amin'ny fiainanao ivelan'ny asa?
YL : Miezaka mandika lahatsoratra iray isan-kerinandro aho. Na dia sarotra aza izany miaraka amin'ireo asa be amin'izao, mahafinaritra ihany koa ny manao azy ary manampy ahy hisintaka tanteraka mandritra ny ora maro izany.
GV: Y a-t-il des liens entre ton activité pour GV et celle dans la sphère professionnelle ?… Misy ifandraisana ve ny zavatra ataonao ho an'ny GV sy ireo amin'ny tontolon'ny asa?
YL : Mifehy ireo tambajotran'ny mpilatsaka an-tsitrapo no anisan'ireo andraikitro isanandro, na fanampiana momba ny fahaizana io na ireo andraikitra fandikana teny.
GV : Inona ireo teny ampiasainao any am-piasana?
YL : Frantsay sy Anglisy amin'ny ankapobeny. Indrisy anefa fa mahamenatra ahy ny haavon'ny fahaizako teny Espaniola ka tsy mamoaka izany.
GV : Ny fanirianao amin'ny zavatra avoakan'ny GV?
YL : Mahavariana ihany ny tsy maintsy amerina ity amin'ny 2018, fa misaotra an'ny GV amin'ny fisoloana tena ny Gazety Afaka ary ny fiarovana ny zo hahazo vaovao sy ny fanehoankevitra. Ireo no zo fototra kanefa miha-voatohintohina hatrany maneran-tany.